ဗမာမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသကိုကူညီခြင်း – Helping the Burmese Delta | THE MYANMAR AND BRITAIN ASSOCIATION
ဗမာမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသကိုကူညီခြင်း – Helping the Burmese Delta
မြန်မာမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသကိုကူညီခြင်း (HTBD) သည် မိသားစု စီမံခန့်ခွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး May Tha Hla နှင့် သူမ၏ခင်ပွန်း Jon Wilkinson တို့မှစီမံခန့်ခွဲသည်။ ဧရာဝတီမြစ်ဝ ကျွန်းပေါ်ဒေသရှိ ရွာသူရွာသားများအတွက် လူနေမှု အဆင့်အတန်းကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ရန်အတွက် လူတစ် ဦးချင်းစီ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝသော သေးငယ်သည့် ကူညီမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည် တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေးအတွက် HTBD ၏ပံ့ပိုးမှုသည် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အသက်မွေး ၀မ်းကျောင်းမှု အလုပ်သုံးမျိုးအပေါ် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပေါင်းစပ်ပူးပေါင်းထားသော ဆောင်ရွက်မှုပုံစံကို အခြေခံသည်။ ။
ဧရိယာတစ်ခုစီသည် ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးတွင် အခြေခံကျပြီး ပေါင်းစပ်ချဉ်းကပ်မှုသည် ရပ်ရွာလူထုအတွက် အကျိုးကျေးဇူးများကို အများဆုံးရရှိစေသည်။ HTBD သည်ကျောင်းများ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ၀န်ထမ်းပေးခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်းအားဖြင့် ကလေးများအတွက် ကျောင်းများလက်လှမ်းမမီခြင်းကို ဖြေရှင်းသည်။ မူလတန်းမှအစ ထပ်မံ၍ ပညာရေးနှင့် နောက်ဆက်တွဲအထိစဉ်ဆက်မပြတ် ပညာသင်ကြားရေးကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ရွာသားများအကြား ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစွမ်းရည်များ စုဆောင်းခြင်းနှင့် အရင်းအမြစ်များ ထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြင့် HTBD သည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု မရှိခြင်းကို ဖြေရှင်းသည်။ ဝင်ငွေရစီမံကိန်းများအတွက် အဓိကလိုအပ်ချက်များနှင့် အရေးပေါ်အကူအညီများ ပေးခြင်းဖြင့် HTBD သည် ရွာသားများ၏ အသက်မွေး၀မ်းကျောင်းမှုကို လည်းတိုးတက်စေသည်။
Helping the Burmese Delta (HTBD) isafamily run charity established and managed by May Tha-Hla and her husband Jon Wilkinson. A small, personal and efficient charity, it helps to improve quality of life for villagers in the Irrawaddy Delta Region. HTBD’s support for building capacity and reducing poverty is basedacollaborative model integrating work on three focuses; education, health and livelihoods. Each area is fundamental in its own right andacombined approach maximises benefits for communities. HTBD addressesalack of access to schools for children by building, staffing and maintaining schools. It aims to cater for all grades, providingacontinuous learning journey from primary school to further education and beyond. HTBD addresses an absence of primary health care by building healthcare skills pools amongst villagers and providing resources. HTBD also improves villagers’ livelihoods by providing key necessities and emergency aid to income generating projects.